एयर अरेबियाबाट आएका मकवानपुरका दुबैजनालाई होम क्वारेन्टाइनमा ! - लोकसंवाद
एयर अरेबियाबाट आएका मकवानपुरका दुबैजनालाई होम क्वारेन्टाइनमा !
मकवानपुर । यही चैत ६ गते एयर अरेबियाबाट नेपाल फर्किएका नेपालीमध्ये मकवानपुर जिल्लाका दुई जनाको पहिचान भएको छ । सो एयरलायन्सबाट आएकी उन्नाइस वर्षीया एक युवतीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको टेकु अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि पुष्टि भएको थियो ।